हिमाल खबरपत्रिका | ‘काठमाडौंको भू–सतह प्रति वर्ष १६ सेन्टिमिटरसम्म धसिंदैछ’
‘काठमाडौंको भू–सतह प्रति वर्ष १६ सेन्टिमिटरसम्म धसिंदैछ’
काठमाडौं उपत्यकाको भू–सतहबारे सन् २०१४ देखि थालिएको अध्ययनमा संलग्न भूगर्भविद् एवं त्रि–चन्द्र क्याम्पस भूगर्भ विभागका प्रमुख, डा. अनन्त गजुरेल भन्छन्, “काठमाडौंको जमीन धसिने क्रम रोक्न पानीको रिचार्ज बढाउनुपर्छ।”
काठमाडौं उपत्यकाको भू–सतह सम्बन्धी अध्ययनबाट के निष्कर्ष पाउनुभयो ?
काठमाडौंको भू–सतह विस्तारै धसिंदै गएको छ । हामीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा गरेको अध्ययनबाट यहाँको भू–सतह प्रतिवर्ष ३ देखि १६ सेन्टिमिटरसम्म धसिंदै गएको देखियो । जमीन धसिने दर ठाउँ अनुसार फरक–फरक छ । जस्तो कि, छाउनीमा प्रति वर्ष १३ सेन्टिमिटर र लाजिम्पाटमा १६ सेन्टिमिटर धसिएको देखियो ।
भू–सतह धसिंदै जाँदा के असर पर्छ ?
यो क्रमले जमीनको सतहमुनि पानी जम्मा गर्ने बलौटे पत्रको क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ र जमीनमा धाँजा पर्न सक्छन् । फलस्वरूप घरहरू चर्किने, कोल्टिने जस्ता समस्या देखिन सक्छन् । लामो क्षेत्रमा धसिएकाले यसको असर अहिले सतहमा नदेखिएको हो ।
यो अध्ययन कति समय लगाएर गर्नुभयो ?
हामीले सन् २०१४ बाट अध्ययन शुरु गरेका हौं । जमीन उठेको, धसिएको, दायाँ–बायाँ सरेको बारेमा जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधि मार्फत अध्ययन गरेका थियौं । यो अध्ययन त्रि–चन्द्र क्याम्पसको भूगर्भ विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र अमेरिकाको यूनाम्को नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् ।
जमीन धसिनुका कारण के हुन सक्छन् ?
कारण यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न कठिन छ । पृथ्वीको हलचलका कारणबाट सतह धसिएको देखिएन । जमीन मुनिको पानी धेरै निकालिनु एउटा कारण हुनसक्छ ।
धसिने क्रम रोक्ने उपाय छ कि ?
काठमाडौं उपत्यकामा जमीन मुनिको पानीको अनुगमन गर्न जरुरी छ । पानी रिचार्ज हुने ठाउँहरू पर्याप्त बढाउनुपर्छ ।